Tamin'ny 28 aprily, mpiara-miasa Venezoelana iray any Chine dia tonga teto aminay hamangy ireo vokatra tsy misy fotony ary namela sary sarobidy.
Vao haingana, ny virus pnemonia dia manohintohina ny fahasalamana sy fiarovana ny olombelona rehetra. Rehefa afaka roa volana mahery ny asa mafy, ny Sinoa sy ny mpiasa mpitsabo sy mpitsabo sinoa dia nahavita nandresy farany tamin'ny ady tamin'ilay areti-mifindra, ary niverina tamin'ny fomba mahazatra ny famokarana vokatra sy fiainana an-trano. Ho an'ny firenen-kafa sy ny olona mbola voan'ny fandrahonana ity valanaretina ity, dia malahelo be sy mahatsapa fihetseham-po mitovy izahay. Na ny governemanta Shinoa na ny vahoaka Sinoa dia samy manandrana miezaka indrindra hanampy ireo firenena sy vahoaka sahirana ity. Manantena izahay fa ny fandrahonana rehetra avy amin'ny olombelona rehetra - covid-19 dia hofoanana haingana araka izay azo atao ary ho voaro sy ho salama ny olona. Rehefa dinihina tokoa, eo ambany fitarihan'ny vondron'olona voatokana ho an'ny olombelona dia mila miakatra sy miara-miasa isika.
Ho valin'ny fiantsoana fiaraha-miasa eran-tany, ny orinasa Finzone Doors & Windows Company dia nanatanjaka ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka ao an-trano sy any ivelany mba hahatratrarana tombontsoa. ny fampivoarana farany ny andiany tsy misy fotony, miaraka amin'ireo tombontsoa maro, no voky tsara ny vahiny, nefa koa raha manitatra ny tsenan'ny varotra any Amerika Atsimo isika dia nanao fandraisana anjara lehibe.
nilaza ny mpiara-miasa aminay fa i Finzone no zavatra hitany amin'izao fotoana izao, ny vokatra miovaova indrindra ary havaozina indrindra indrindra, izay ny farany, izay akaiky indrindra amin'ny takian'ny vokatra mpanjifa. Amin'ny ankapobeny, ny vokatra tsara tarehy, azo ampiharina, azo antoka, hipetraka toerana kely sy tombony hafa .Ny ataontsika tsy manambony ny reharehanay, izahay, amin'ny vahiny ny vokatra tsara indrindra, ny serivisy tsara indrindra.
Ary manantena izahay tamim-pahatsorana fa aorian'ny faran'ity valan'aretina ity dia namana maro be kokoa no afaka mitsidika ny orinasa misy anay, mahatakatra ny vokatra azontsika ary hanana fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ny Finzone.